Muuri News Network » XOG + SAWIRO: Guulleed oo Addis Abbaba looga saxiixday Arin Halis ah.
XOG + SAWIRO: Guulleed oo Addis Abbaba looga saxiixday Arin Halis ah.
Nov 17, 2015 - Comments off
Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahaan casuumad rasmi ah ku joogay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ayaa kulamo kula yeeshay madaxda dowlada Itoobiya.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug waxuuu kulankii ugu horeeyay la yeeshay Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Tedros Adhanom, waxayna labada dhinac ka wada hadleen xoojinta xiriirka Dowlada Itoobiya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo xuduud dhinaca dhulka ah leh gaar ahaan xoojinta Ammaanka iyo Ganacsiga.
Kulankaan markii uu dhamaaday ayaa waxaa Saxaafada la hadlay Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Tedros Adhanom oo sheegay inay Itoobiya muhiimad gaar ah u leedahay dowlad goboleedka Galmudug waxuuna sheegay inay aad u soo dhaweynayaan booqashada markii ugu horeysay Madaxweyne Guuleed ku yimid dalka Itoobiya.
Sidoo kale, Madaxwenaha Maamul goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa sheegay inuu kulankani ahaa mid si weyn labada dhinac isku afgarteen laguna gorfeeyay xoojinta xiriirka labada dhinac gaar ahaan Ammaanka iyo Ganacsiga.
Si kastaba ha ahatee, dowlada goboleedka Galmudug ayaa xuduud dhanka dhulka ah leh dowlada Itoobiya, waxuuna safarka Madaxweyne Guuleed ku tagay Itoobiya noqonayaa kii ugu horeeyay.
Waxaana Guulleed loo sheegay in Meesha laga saari doono maamulka kale ee kula loolamaya awooda Gobalada dhaxe ee Shiikh shaakir hasa ahaatee looga baahan yahay in uu u hogaansamo Awaamiirta Dowlada Ethiopia.
Xogta ayaa sheegeysa in Guulleed oo aad u qanacsan uu qalinka ku duugay Hishiis uu lagalo Ethiopian-ka isagoo bulshada Gobalada dhaxe ku hogaamin doona Awaamiirta Ethiopia.